Mivavaha ka aza mitsahatra satria... | Hevitra MPANOHARIANA
Mivavaha ka aza mitsahatra satria...
2010-12-20 @ 09:51 in Finoana
Antomotra ity ny faran'ny taona, ho tonga ny krisimasy... nentina hahatsiarovana ny nahaterahan'ny Mpamonjy eo amin'ny finoana kristiana na dia tsy voatery ho marina aza io andro io entina ho fahatsiarovana ny fahaterahana io. Ny krisimasy rahateo niainga avy tamin'ny anarana hoe "Lamesan'i Kristy" fa tsy hoe nahaterahan'i Kristy. Tsy manakana ahy hankalaza ny Tompo anefa izany rehefa fotoana ifanarahana io. Odiana tsy lazaina intsony ny fahasahiranana fa resaka ara-panahy aloha no tsidihana vetivety nefa tsy manakana anareo ho tezitra aho raha milaza hoe hifety satria ny fankalazana ny Tompo any am-piangonana no ataoko hoe fety eto.
Eo amin'ny resaka ara-panahy ihany dia tsy haiko na misy finoana na zavatra hafa ao ambadik'ilay faritra tsy azo itsahina sy tsy azo andehanana ao anatin'ny Lapan'ny Tanànan'Antananarivo fa tsy maintsy lasa hatrany ny saina. Marina dia marina fa vita tamin'ny hazo ilay toerana raha vita rarivato tsara kosa ny manodidina nefa angaha moa manakana ny fahalovany na fahasimbany izany? Sa sao dia ianjeran'ilay lustre goavana mahatratra 750kg izay mandalo eo ambaniny ka ho faty tsy trà-drano? Raha anaty trano izany manko no tsy azo andehanana na tsy azo itsahina na iza na iza nefa dia mila ho eo an-tokonam-baravarana io faritra 5X4 metatra io dia hoy ny fanahiako hoe sao dia finoana kosa no antony na sanatria sanatria... tao no nametrahana ilay zavatra... hitanareo ihany ity finoana ananan'ny olombelona ity ary tsy mivaona amin'izany ny finoana ananan'ny Malagasy dia lasa lavitra ny eritreritra. Tsy voatery ho marina velively io fanahiako io fa mba zaraina aminareo fotsiny.
Na izany na tsy izany dia manentana izay mpivavaka rehetra aho hitodika hatrany amin'izay inoany ary fotoana izao hanokanana fotoana aminy sy hieritreretana lalina ny fiainam-panahintsika sy ny fiainana andavanandrontsika.
Jentilisa, 20 desambra 2010 amin'ny 11:50
PS: sa betsaka faritra an-trano tsy azon'ny na iza na iza itsahana sy tsy andehanana ankoatra ny faritra hanaovana fivavahana hitanareo?